रोनाल्डोको गोलले टार्न सकेन युभेन्टसको हार | सबै खेल
रोनाल्डोको गोलले टार्न सकेन युभेन्टसको हार
१३ माघ २०७६, सोमबार १४:४७
नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै पोर्चुगिज स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उत्कृष्ट फर्ममा देखिएका छन् । इटालिनयन क्लब युभेन्टका लागि रोनाल्डोले सन् २०२० मा ५ खेलमा १ ह्याट्रिकसहित ८ गोल गरेका छन् ।
आइतबार राति भएको इटालियन सिरि एको खेलमा पनि रोनाल्डो आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिए । तर, त्यसले टिमलाई युभेन्टसलाई भने जित दिलाउने सकेन । आइतबार राति भएको खेलमा युभेन्ट्स नापोलीसँग २–१ले पराजित भयो । यो युभेन्टसको सन् २०२० को पहिलो हार हो ।
नापोलीविरुद्ध पहिलो हाफमा युभेन्टसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो । तर, दोस्रो हाफमा नापोली लयमा देखिएयो । फलस्वरुप उसले ६३ औँ मिनेटमा पिटर जिलिन्स्कीको गोलमा अग्रता लियो । त्यसको केही समयपछि युभेन्टसले बराबरी गर्ने मौका पाएको थियो । तर गोञ्जालो हिग्वेनको बाइसाइकल किक गोलकिपर एलेक्स मेरेटले बचाएका थिए ।
लोरेन्जो इन्सिग्नेले खेलको ८६औँ मिनेटमा गोल गर्दा नापोलीले अग्रता दोब्बर बनायो । ९०औँ मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गरे पनि हार भने टार्न सकेनन् । इटालियन सिरी ए मा रोनाल्डो लगातार आठ खेलमा गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् ।
हारपछि पनि युभेन्टस ५१ अंकका साथ शीर्ष स्थानमै छ । ४८ अंक जोडेको इन्टर मिलान दोस्रो स्थानमा छ भने जालियो ४६ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ । नापोली भने २७ अंकका साथ १०औँ स्थानमा छ ।
Tags: juventus, ronaldo, serie-A
सावित्रा चम्किँदा गोकुलम विजयी
भोलाको निर्णायक गोलमा पुलिस विजयी
थ्री स्टारसँग हेमन्तले गरे दुई वर्षको सम्झौता
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १९:०४
ए डिभिजन लिग समाचार
विमल घर्तिमगरले मच्छिन्द्रबाट ए डिभिजन लिग खेल्ने
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १८:१०
आज एल क्लासिको भीडन्त, रोनाल्डो र मेसीको स्थान लेलान् भिनिसियस र फातीले ?
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १५:४८
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रिकेट समाचार
दुई वर्षपछि भारत र पाकिस्तान भिड्दै
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:०९
बुन्डेसलिगा : डर्टमन्ड र बायर्न विजयी
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १२:३९
प्रिमियर लिग : ब्राइटनमाथि सिटीको सहज जित, किङको ह्याट्रिकमा वाट्फोर्डले एभर्टनलाई हरायो
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १२:१८
फिचर फुटबल राष्ट्रिय फुटबल
सी डिभिजन छनोटका नाममा गरिब क्लबहरूमाथि एन्फाको ‘ब्रह्मलुट’
१९ भाद्र २०७८, शनिबार ०२:२९
‘सी’ डिभिजन छनोटः ज्वरो मात्र नापेर एन्फाको ‘हदैसम्मको स्वास्थ्य सतर्कता’ !
१६ भाद्र २०७८, बुधबार १७:२६